Dhanieri 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
11 “Zvino mugore rokutanga raDhariyasi muMedhiya,+ ini ndakasimuka kuti ndimusimbise uye ndimutsigire. 2 Zvino ndichakuudza chokwadi:+ “Tarira! MuPezhiya muchamuka madzimambo matatu,+ uye wechina+ achaunganidza pfuma zhinji kupfuura mamwe ose.+ Paanongova nepfuma zhinji, achamutsa zvinhu zvose kuti zvirwe noumambo hweGirisi.+ 3 “Zvino mambo ane simba achamuka otonga nzvimbo huru,+ oita sezvaanoda.+ 4 Paachange amuka,+ umambo hwake huchaputswa, hwokamurirwa kumhepo ina+ dzokumatenga,+ asi kwete kuvazukuru vake+ uye kwete maererano nokutonga kwake kwaakanga atonga nako; nokuti umambo hwake huchadzurwa, hwopiwa vamwe vasiri ivava. 5 “Zvino mambo wokumaodzanyemba achava nesimba, iye mumwe wemachinda ake; uye iye achamukunda, otonga nzvimbo huru kupfuura simba rokutonga kwaiyeye. 6 “Kana makore akati apera, vachabatana, mwanasikana wamambo wokumaodzanyemba achaenda kuna mambo wokuchamhembe kuti vaite urongwa hwakarurama. Asi haazorambi aine simba roruoko rwake;+ uye haazomiri, uyewo ruoko rwake haruzomiri; uye achagamuchidzwa, iye nevaya vakauya naye, naiye akamubereka, nouya aiita kuti ave nesimba munguva idzodzo. 7 Mumwe anobva panhungirwa+ yemidzi yake achamuka panzvimbo pake, achauya kuuto rehondo orwisa nhare yamambo wokuchamhembe uye achavarwisa okunda. 8 Achaendawo kuIjipiti aine vanamwari vavo,+ nemifananidzo yavo yakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa, nezvinhu zvavo zvakanaka zvakagadzirwa nesirivha nendarama, pamwe chete nenhapwa. Iye acharega mambo wokuchamhembe kwemakore. 9 “Achapinda muumambo hwamambo wokumaodzanyemba odzokera kunyika yake. 10 “Zvino vanakomana vake vachaenda kunorwa, vounganidza boka remauto makuru ehondo. Achauya ofashamira opfuura. Asi achadzokera, uye achaenda kunorwa kusvikira kunhare yake. 11 “Mambo wokumaodzanyemba achatsamwa oenda, orwa naye, iye mambo wokuchamhembe; uye achamutsa boka guru revanhu, uye chokwadi boka racho revanhu richaiswa muruoko rwaiyeye.+ 12 Boka racho revanhu richaendwa naro. Mwoyo wake uchazvikwidziridza,+ uye achaita kuti makumi ezviuru afe; asi haazoshandisi nzvimbo yake yakasimba. 13 “Mambo wokuchamhembe achadzoka, ounganidza boka guru revanhu kupfuura repakutanga; uye pakuguma kwenguva dzacho, makore akati, achauya, achiita saizvozvo neuto guru+ rehondo nezvinhu zvizhinji kwazvo.+ 14 Vazhinji vachasimuka munguva idzodzo kuti varwise mambo wokumaodzanyemba. “Vanakomana vemakororo vevanhu vako, vachada kufanana nevamwe kuti vaedze kuita kuti zvakaratidzwa zvive zvechokwadi;+ uye vachagumburwa.+ 15 “Mambo wokuchamhembe achauya, ogadzira rusvingo rwokukomba narwo,+ otora guta rine masvingo. Asi mauto okumaodzanyemba, haazomiri, kunyange vanhu vake vakasarudzwa; uye havazovi nesimba rokuramba vakamira. 16 Uya achauya kuzomurwisa achaita sezvaanoda, hapana achazomira pamberi pake. Achamira munyika Yokushongedzwa,+ uye kuparadza kuchava muruoko rwake.+ 17 Achatendeudza chiso chake+ kuti auye nesimba roumambo hwake hwose, uye achava nourongwa hwakarurama;+ uye achabudirira+ pane zvaanoita. Iye achabvumirwa kuparadza mwanasikana wevakadzi. Haazomiri, uye haazorambi ari wake.+ 18 Achatendeudzira chiso chake kunyika dzomumhenderekedzo yegungwa+ otora zhinji. Mutungamiriri achaita kuti kuzvidza kwake kugume, zvokuti kuzvidza kwake hakuzovipo. Achaita kuti kudzokere pana iyeye. 19 Achatendeudzira chiso chake kunhare dzenyika yake, achagumburwa owa, uye haazowaniki.+ 20 “Zvino panzvimbo pake pachamuka mumwe+ achaita kuti mumanikidzi+ apfuure nomuumambo hwakanaka kwazvo, uye achaputswa mumazuva mashomanana, asi kwete nokutsamwa kana muhondo. 21 “Panzvimbo pake pachamuka mumwe achazvidzwa,+ havazomupi kukudzwa kwoumambo; uye achauya munguva yokusanetseka,+ otora umambo nokunyengera.+ 22 Asi mauto+ anofashamira achafashamirwa nokuda kwake, oputswa;+ uye ndizvo zvichaitwawo+ Mutungamiriri+ wesungano.+ 23 Achanyengera nokuda kwokubatana kwavo naye, ouya, ova nesimba achishandisa rudzi ruduku.+ 24 Munguva yokusanetseka,+ achapinda kunyange mudunhu rakaorera oita zvisina kumboitwa nemadzibaba ake nemadzibaba emadzibaba ake. Achaparadzira kwavari zvakatorwa nechisimba nezvakapambwa nezvimwe zvinhu; uye acharongera nzvimbo dzakavakirirwa mazano ake,+ asi kwenguva pfupi chete. 25 “Achamutsa simba rake nomwoyo wake aine uto guru rehondo kuti arwe namambo wokumaodzanyemba; asi mambo wokumaodzanyemba achaenda kuhondo aine uto guru kwazvo rehondo rine simba. Haazomiri, nokuti vachamurongera mazano. 26 Vaya vanodya zvokudya zvake zvoumbozha vachamuparadza. “Uto rake rehondo, richakukurwa, uye vazhinji vachawira pasi vaurayiwa. 27 “Kana ari madzimambo maviri aya, mwoyo yavo ichada kuita zvakaipa, acharamba achitaura nhema+ ari patafura imwe chete.+ Asi hapana chichabudirira,+ nokuti kuguma ndokwenguva yakatarwa ichauya.+ 28 “Achadzokera kunyika yake nezvinhu zvizhinji kwazvo, uye mwoyo wake ucharwisana nesungano tsvene.+ Achaita zvinobudirira+ odzokera kunyika yake. 29 “Achadzokera panguva yakatarwa,+ achauya kuzorwisana nokumaodzanyemba;+ asi panguva yokupedzisira hazvizovi sepakutanga. 30 Ngarava dzokuKitimu+ dzichauya kuzomurwisa, uye achasuruvara. “Achadzokera otsamwira kwazvo+ sungano tsvene,+ oita zvinobudirira; uye achadzokera ofunga nezvevaya vanosiya sungano tsvene. 31 Kune mauto achasimuka achibva kwaari; uye achasvibisa nzvimbo tsvene,+ iyo nhare, obvisa chibayiro chenguva dzose.+ “Achaisa ipapo chinhu chinonyangadza+ chinoita kuti pave nokuparadzwa.+ 32 “Achatsausa+ vaya vari kuitira sungano+ zvakaipa, achishandisa mashoko okunyengera.+ Asi vanhu vanoziva Mwari wavo+ vachakunda,+ voita zvinobudirira. 33 Kana vari vaya vane njere+ vari pakati pevanhu, vachaita kuti vazhinji vanzwisise.+ Vachagumburwa nebakatwa uye nomurazvo womoto, nokutapwa uye nokupambwa,+ kwemazuva akati. 34 Asi pavanenge vagumburwa vachabatsirwa norubatsiro ruduku;+ uye vazhinji vachabatana navo nokunyengera.+ 35 Vamwe vevaya vane njere vachagumburwa,+ kuti basa rokuedza riitwe nokuda kwavo, kuti kunatsa nokuchenesa+ zviitwe, kusvikira kunguva yokuguma;+ nokuti ndezvenguva yakatarwa.+ 36 “Mambo achaita zvaanoda, achazvikwidziridza ozvikudza kupfuura vanamwari vose;+ uye achataura zvinhu zvinoshamisa pamusoro paMwari wavanamwari.+ Achabudirira kusvikira kutsamwa kwaguma;+ nokuti chinhu chakasarudzwa chichaitwa. 37 Haazofungi nezvaMwari wemadzibaba ake; uye haazofungi nezvokuda vakadzi kana vamwe vanamwari vose, asi achazvikudza kune vanhu vose.+ 38 Achakudza mwari wenhare ari munzvimbo yake; uye achakudza mwari akanga asingazivikanwi nemadzibaba ake achishandisa ndarama nesirivha nematombo anokosha uye achishandisa zvinhu zvinokosha. 39 Achabudirira kurwisa nhare dzakavakirirwa kwazvo, pamwe chete namwari wokune imwe nyika. Achaita kuti munhu wose anomuremekedza akudzwe kwazvo, achaita kuti vatonge vanhu vazhinji; uye achaganhura nyika nokuda kwomutengo. 40 “Munguva yokuguma mambo wokumaodzanyemba+ achasundana naye, uye mambo wokuchamhembe achamuuyira nengoro zhinji nevatasvi vemabhiza nengarava zhinji; uye achapinda munyika dzacho ofashamira, opfuura. 41 Achapindawo+ munyika Yokushongedzwa,+ uye nyika zhinji dzichakundwa.+ Asi idzi ndidzo dzichapukunyuka muruoko rwake, Edhomu neMoabhi+ nechikamu chikuru chevanakomana vaAmoni. 42 Acharamba achitambanudzira nyika dzacho ruoko rwake; uye kana iri nyika yeIjipiti+ haizopukunyuki. 43 Achatonga pfuma yakavanzwa yendarama nesirivha nezvinhu zvose zvinokosha zveIjipiti. VaRibhiya nevaItiopiya vachange vachitevera tsoka dzake. 44 “Asi kuchava nemashoko achamunetsa,+ anobva kunobuda zuva+ nokuchamhembe, uye iye achaenda akatsamwa kwazvo kuti atsakatise uye aparadze chose vazhinji.+ 45 Achadzika matende omuzinda wake pakati pegungwa guru negomo dzvene Rokushongedzwa;+ uye achasvika pakuparadzwa,+ asi hapazovi neanomubatsira.+